မေတ္တာကမ္မဌာန်းအားထုတ်ပုံ – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း ကျင့် စဥ် လေး အ သေး စိတ် သိ ချင် ပါ တယ် ဆို သော ယောဂီ များ အတွက် ရည် ရွယ် ၍ ရေး ဖြစ် ပါ ၏ ပထမ ဦးစွာ ကျင့် ပုံ ကျင့် နည်း လေးကို မရေး ပေးခင် ဘာ ကြောင့် ကျင့်သင့် တာလဲ ဆိုတာ လေးကို အရင် ရေးပေး ပါရစေရှင် ..မေတ္တာ ကို ဘာကြောင့် ကမ္မဌာန်း တရား နဲ့ ပွားများ အားထုတ် ရပါသလဲ ဆိုရင်… မေတ္တာကို ရွတ်ဖတ် သရယ်ဇယ် နည်း မေတ္တာကိုနှလုံးသွင်းနည်း အဲ့ဒါတွေထက် အဆင့်မြင့်တဲ့မေတ္တာကို စျာန်အထိပေါက်အောင် ဘယ် လိုအား ထုတ်ရမလဲ ဆိုတာ ပါပဲ #မေတ္တာကမ္မဌာန်းပိုင်းရဲ့ အဆင့်အမြင့်ဆုံးအပိုင်းက စျာန်ပေါက် အောင် အားထုတ်တဲ့ နည်းပါပဲ.. မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း ဆို သည်မှာ #မတျတော #ကရုဏာ #မုဒိတာ #ဥပကျခော ဆိုတဲ့ ဗြဟ္မာစိုရ် တရား (၄)ပါးမှာ (တနည်း) ဗြဟ္မာဝိဟာရ တရား ဗြဟ္မာ ကြီးတို့ ၏ နေထိုင် ကျင့်ပုံနှင့် တူတဲ့ အမျိုးအစား ၄ ခုထဲမှ ပထမဆုံး ကျင့်စဥ် ကို မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း ကျင့်စဥ် လို့ခေါ်ပါတယ်..မေတ္တာကမ္မဌာန်း ကို စျာန်ပေါက်အောင် ကျင့်နိုင် သွားပြီ ဆိုရင် အပေါ်က ပြောခဲ့ တဲ့ ဗြဟ္မာ ကြီးတို့၏ နေထိုင်ပုံနှင့်တူသောကြောင့် ဗြဟ္မာဝိဟာရတရား နှင့် နေထိုင်ခြင်း တူတယ် လို့ မြတ်ဗုဒ္ဓက မိန့်ဆိုပါတယ်..ဒီနေရာ လေးမှာ ကမ္မဌာန်း ဆိုတာ လေးကို အနည်းငယ် ရှင်းပြ ပါ ဦးမည်…ကမ္မဌာန်း ဆိုတဲ့ အရာဟာ ကျင့်စ မှာ အင် မတန် ခက်ခဲ လေးလံ ပေမယ့် အကျိုး ရလဒ် တွေရ လာ လေလေ ချမ်းသာ လေလေ ဖြစ် ပါတယ်.. #မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း အမျိုး အစားသည် သမထ ကမ္မဌာန်း ပါ..သမထ နဲ့ ဝိပဿနာ ကမ္မဌာန်း ကျင့်စဥ် ၂ ခုဟာ အာရုံ ယူပုံခြင်း မတူ သလို ရှုပွားပုံ အခြင်းအရာ ​ချင်းလည်း မတူပါဘူး.. ကမ္မဌာန်း ဆိုတာ ရှုစရာ အာရုံ object တခု ပေါ်မှာ ရှုပွားနည်းမှန်ကန်ရပါမယ်..တဲ့..။
ဥပမာ ပညတ်ကို ဖြစ်ပျက် လုပ်လို့ ဝိပဿနာ ရဲ့ရလဒ် မဖြစ်သလို ပဲ ပရမတ် ကိုစိုက်ရှု လို့လည်း စျာန် မ ပေါက် ပါဘူး…ဒါလေး ကို​တော့ အရေး တကြီး သိမှတ် ထားရ ပါမယ်…ဘာလို့ ဆို တော့ စာရေးသူ တုန်းက လုံးဝ မသိခဲ့လို့ ပါရှင်…မိမိ အားထုတ် နေတာ သမထလား ဝိပဿနာလား ကွဲ ကွဲ ပြားပြား သိဖို့ဟာ အင်မတန်မှကို အရေးကြီးလွန်းလှတာပါ..အဲ့လိုမှမသိထားရင် မိမိရှုနေတာ သမထ မှန်း မသိ ဝိပဿနာ မှန်း မသိပဲ ယောင် ချာချာ ယောဂီ ဖြစ် နေ ပါ လိမ့် မယ်…ဒါ မို့ ယ ခု မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း က သမထ ကမ္မဌာန်း ဖြစ် တာမို့ ဝိပဿနာ ရဲ့ ရှေ့ ပြေး ကျင့်စဥ် ဖြစ်ပါ တယ်.. မဖြစ် မနေ ကို အား ထုတ် ရ မှာပါ ဘာ ကြောင့်လဲ ဆို ရင် သူဟာ မိမိ ရဲ့ စိတ် မှာ ကြီး စိုး နေ တဲ့ ဗျာပါရနီဝရဏ ကို ရှင်းထုတ် ပေးနိုင်လို့ပါပဲ…ထိုနည်းတူစွာ ပဲ ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ကမ္မဌာန်း ကိုလည်းပဲ သဒ္ဓါ တ ရား တွေ ထက် လာ အောင် အား ထုတ် ရ ပါ သေး တယ်…နောက် ပြီး မရဏာ နုဿတိ ကမ္မဌာန်း ကိုလည်း အားထုတ် ရပါသေး တယ် ထကြွနေတဲ့ ရာဂတဏှာကို ငြိမ်းစေတက် လို့ပါ.. ဘာလို့အားထုတ်ဖို့ လိုပြန်လည်းဆိုတော့..တခါတခါမှာ မေတ္တာအား ထုတ်ရင်းနဲ့ ရာဂတဏှာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတက်လို့ပါပဲ..ထိုအခါမျိုးမှာလည်း အသုဘကမ္မဌာန်းကို လည်းကူညီပြီး အားထုတ်ဖို့ လိုပြန်ပါတယ်..ဒီကမ္မဌာန်းတွေဟာ ဝိပဿနာနဲ့တွဲပြီး ကျင့်ရတဲ့ရှေ့ပြေးကျင့်စဥ်တွေပါပဲ.. သူတို့ မပါ ရင် ဝိပဿနာ ၏ ကျင့်စဥ် ခရီး မတွင် နိုင်ပါ ဘူး.. တဲ့..ထို သို့ ဝိပဿနာ ၏ ရှေ့ ပြေး သမထ ကမ္မဌာန်းများကို အကူအနေနဲ့အားထုတ်ရပါတယ်..။
ဤသည် ကိုပင် ကိုယ်စောင့်ကမ္မဌာန်း(၄)ပါးလို့လည်း ဆိုပြန်ပါသေးတယ်..ဒါမို့ သမထကမ္မဌာန်း တွေကို ဘာလို့ တွဲပြီးရှု ရပါသလဲ ဆိုတာလေး အရင်ရှင်း ပြရတာပါ.. #သမထ ဆိုတာ ပြည်တန် တဲ့ သမာဓိပါ #ဉာဏ်ကိုပိတ်ဆို့ စေတက်တဲ့နီ ဝရဏတရားတွေ ကိုငြိမ်းအေးစေသော သမာဓိပါ. ခုလို သမထ ကျင့်စဥ် တွေကို ကျင့်လိုက် ခြင်းဖြင့် မိမိတို့ မှာရှိ နေသော အကြမ်းစား ကိလေသာ တွေကို ငြိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်..နောက်ထပ်ရှိနေသေးတဲ့ သိမ်မွေ့တဲ့ကိလေသာတွေကိုတော့ဝိပဿ နာကသက်သက်သာသာနဲ့ရှင်းသွားနိုင်ပါတယ်..ကမ္မဌာန်းဆိုသည်မှာသမထဝိပဿနာတို့၏တည်ရာအာရုံကိုခေါ်ပါတယ်.တနည်း..ကမ္မဆိုတာကအလုပ်ဌာနဆိုတာကနေရာလေးတခု#အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာလေးကိုကမ္မဌာန်းလို့ခေါ်ပါတယ်..#မိမိစိတ်ကလေးတည်တဲ့နေရာလေးကိုကမ္မဌာန်းလို့ခေါ်ပါတယ်..အဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကဘယ်မှမရောက်ပဲကြာကြာ လေးတည်နေတာကိုသမာဓိလို့ ခေါ်ပါ တယ်.ဤအကြောင်း အရာမျိုးတွေကို အသေးစိတ် ရေးပေးထါးသော အခြား ဘာသာရေး post များတွင် အကျယ် တဝင့်ဖတ် ရှုနိုင်သည်မို့..ခုစာ ရေးသူ ရေးမယ့်အကြောင်းလေး မှာတော့ အသေးစိတ် များ ထည့် မရေးပေး တော့ပါ ဘူးနော်..။
သမထ ကမ္မဌာန်း အားထုတ်မယ့် ယောဂီက မိမိစရိုက်နဲ့ ကိုက်မယ့်မူလ ကမ္မဌာန်းတခုကို ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင်​ပေါက် ပေါက်မြောက်မြောက် အားထုတ်ထား ​ပြီးသား ဖြစ်နေ ရပါတယ် အဲ့ဒီလိုအားထုတ် ပြီးမှသာအခြား ကမ္မဌာန်းကိုကူးပြောင်းအားထုတ် ရပါတယ်တဲ့ ဘာလို့ဆိုတော့ အဲ့မူလကမ္မဌာန်း က မိမိ ကို သမာဓိ တည် အောင် ဘယ် လို လုပ် ရမယ် ဆို တာ ကို သင်ပေး သွား မယ် ကမ္မဌာန်း သဘောရဲ့ နက်နဲတဲ့အပိုင်းတွေကို ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ရမလဲဆိုတာကို သူကသင်ပေးသွားတယ်.. အဲ့ဒီကရတဲ့ အတွေ့အကြုံ တွေနဲ့ နောက်ထပ်နောက်ထပ် ကမ္မဌာန်း တွေကိုဖြေရှင်း သွားရုံ ပါပဲ… ဒါမို့ မိမိစရိုက်နဲ့ ကိုက်မယ့် ကမ္မဌာန်းကို ရွေးချယ် ပွားများ ထားရ ပါမယ်..
ဘယ်နည်းကိုပဲ အားထုတ် အားထုတ် မူလ အခြေခံ ကမ္မဌာန်း ဆိုတာလိုကို လိုပါတယ်… တဲ့စျာန် မပေါက် သေးရင် သမထ မဖြစ်သေး သလို..ဉာဏ်မပေါက် သေးရင်လည်း ဝိပဿနာ မဖြစ်သေး ပါဘူး… တဲ့..ဒါဟာလည်း လေ့ကျင့်နေတဲ့ အပိုင်းပဲ ရှိပါသေးတယ် .တဲ့ .ဒါကြောင့် ဝိပဿရိပ်သာ တွေမှာ ဝိပဿနာဉာဏ် ဖြစ် ပျက် မရောက်မှီ ရှေးဦးကမ္မဌာန်းအနေနဲ့ ဉာဏ်ကိုပိတ် ဆီးတက်တဲ့ နီဝရဏ တရား တွေ ကင်းစင် အောင် သမာဓိ ကမ္မဌာန်း တွေကို အားထုတ် ရတာ ဖြစ် ပါတယ်… ဘာလို့ အဲ့ လို အရင် ဆုံး အားထုတ် ရပါ သလဲ ဆိုရင် ဖြင့်… နီဝရဏ တရား တွေ မကင်း စင်ပဲ နဲ့ ပီတိပဿတိ တရား တွေဆိုတာ မဖြစ်လာ ပါဘူး..နီဝရဏ တွေ ကင်းစင်သွားမှသာ ပီတိပဿတိ ဆိုတဲ့ တရားထူး တရားမြတ် တွေဟာ ရောက် ရှိလာ တာပါ…နီဝရဏ ကင်းဖို့ ဆိုတာဟာ သမထ ရော ဝိပဿရောအခြေခံ အပိုင်းမှာ လုပ်ကိုလုပ် ရတာချင်း တူတူပါပဲ… ရှုတဲ့အခါ မှာ အတွေးကို တွန်းဖယ်ရပါမယ်… တဲ့..အတွေးကို ဖြစ် ပျက် လိုပ်လို့မရပါဘူး… တဲ့..ဘာကြောင့် တွန်းဖယ်ရပါ သနည်း ဆို ရင် အဲ့ ဒီ အ တွေး တွေဟာ ကာမဂုဏ်တွေ ကို တောင့် တ ကြောင့် ကြ ပူ ပန် နေ တဲ့ အတွေးတွေသာ များပါတယ်..လူ့ရဲ့သဘာဝကို ကအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲထောက်တည်ထားတာပါ…ဒီတော့ အာ့တွေ မတွေး ရဘူး ဆိုရင် ဘာဖြစ်လာ တုန်းဆို တော့ အိပ်ငိုက် လာတက် ပါတယ် …ဒီ တရား တွေဟာဉာဏ်ကိုပိတ်ဆို့တက်တဲ့ နီဝရဏ တရားတွေပါ..သူတို့ရှိနေရင်ဉာဏ်မဖြစ်ပါဘူး…။
ဒါကြောင့် သူတို့ကိုတွန်းဖယ် ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ ကာမစ်ဆန်ဒ နီဝရဏဗျာပါဒနီဝရဏ တွေဆို တာလော ဘတွေး၊ ဒေါသ တွေးတွေ ပါဘဲ…အဲ့အတွေး တွေကို တွန်းကို တွန်းဖယ် ရမယ် မတွန်း ဖယ်ရင် နီဝရဏ မရှင်းဘူး…. ဉာဏ်ကို မပွင့် ပါဘူး…သို့ ကြောင့် သမထ သည် ဖြစ်စေ ဝိပဿနာ သည် ဖြစ်စေ ဒီနီဝရဏ တွေကို တွန်းဖယ် ရတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ကို လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါ တော့တယ်… ကိုယ် နဲ့ ကိုက်မယ့် ကမ္မဌာန်း တခုခုကို ယူပါ.ဘယ်လိုပဲ တဏှာကို ငြိုးခြောက် အောင် လုပ်လုပ်. ဘယ်လို ကျင့် ကျင့် တဏှာငြိုး ခြောက်သွား တယ်ဆို ရင်မှန် ပါတယ်…ဒီ တော့ သူ့နည်း ကောင်း တယ် ဟိုနည်း ကောင်းတယ် ဒီနည်းကောင်း တယ်စသဖြင့် လုပ်နေဖို့ မလိုတော့ပဲ တဏှာကို ငြိုး ခြောက် စေတဲ့ မည် သည့် မည်သည့် နည်းမဆို အကျ င့်မှန်သာ ဖြစ်ပါ တော့တယ်… တဲ့..မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း ဆိုသည် မှာဘာလဲ? မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါ ပညတ်ကို အာရုံ ပြု ရတဲ့ ကမ္မဌာန်းပါ.. တနည်း ပုဂ္ဂလိက ကမ္မဌာန်းလို့လည်း ခေါ်ပါတယ် သတ္တဝါ ပေါင်းစုံ စရိုက်မျိုး စုံနဲ့ ဆိုင် ပါတယ်..ကမ္မဌာန်း အမျိုး အစား က ပညတ် ကမ္မဌာန်းပါ.. တရား အားထုတ် တော့မည့် ယောဂီ တယောက်ဟာ မေတ္တာကမ္မဌာန်း ကို မိမိ သက်စောင့် ဘာဝနာအဖြစ် ဖွဲ့ယူပြီးတော့ အရိုး စွဲထုံ မွှန်းနေအောင် လေ့ကို လေ့ကျင့်ထားရပါမယ်… တဲ့ဘယ် အချိန်တရားစစ သတ္တဝါ အနန္တကို မေတ္တာပို့ ရမှာ ချည်းဖြစ် ပါတယ် အခြေခံ မေတ္တာ စိတ်လေးမှ မထားနိုင်ဘူး ဆိုရင် တော့ တရား အတက်နှေးပါလိမ့်မယ်… တဲ့မေတ္တာကမ္မဌာန်း ဟာ သမထ ကမ္မဌာန်းဖြစ်လို့ ရှေးဦးကမ္မဌာန်းဟာ ကြမ်းတ မ်း တဲ့ ကိလေသာ တွေ အရင် ရှင်း ရ မှာ ဖြစ် နေ တာ ကြောင့်…စိတ်ကြမ်း ကိုယ်ကြမ်း အဖြစ်ရှိ နေမယ် ဆိုရင်အဲ့ ဒီ မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း ကို ဘယ်လို မှ အောင်မြင် ပေါက် မြောက် နိုင် မှာ မဟုတ် ပါဘူး..။
အဲ့ဒီ မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း ကိုမှ မအောင်မြင်ဘူး ဆိုရင် မည်သည့် သမထ ဝိပဿနာ ကမ္မဌာန်း ကို မှ နှလုံးသွင်း နိုင်မည်မဟုတ်တော့ပါ…ဒါမို့ မိမိကိုယ်မှာရှိတဲ့ စိတ်ကြမ်း ကိုယ်ကြမ်းတွေကို လျော့ချ ရပါ မယ်…။ ဒေါသ ကြီးမား တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် သည် မြတ်ဗုဒ္ဓ ပေးထါးသော ဘယ် ကမ္မဌာန်း တခု ကို မှ အောင်မြင် ပေါက်မြောက်နိုင်အောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ ဒေါသရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း ကို လုံးဝ လုံးဝ အားထုတ် လို့မရပါဘူး… တဲ့..ဒီ မေတ္တာကမ္မဌာန်း ဟာ ဒေါသ ၊ လောဘ ကင်းစင် မှ အောင်မြင်တဲ့ ကမ္မဌာန်းမျိုး ဖြစ်ပါတယ်… တဲ့…ဟောဒီ မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း သည် ဘုရားရှင်ကြီး နှင့် သူတော်ကောင်းကြီးများက လက်မလွတ်တန်း ကိုယ်စောင့်ကမ္မဌာန်း အဖြစ်ကျင့် သုံးကြတာ မျိုးဖြစ် ပါတယ်… ဒါကြောင့် မို့ ဘုရား သားတော် သမီးတော် များ ဖြစ်ကြ သော ယောဂီ များ က လည်း ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ကြိုးစားပွားများအားထုတ်သင့်ပါတယ်….ဒလောက် အရေးပါ အရေး ကြီးလွန်းသော မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း ပွားများနည်းကို ဘယ်လို စတင်ရှုပွားရမည်နည်း?.ပထမဦးဆုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာလေးတခုကိုရွေးပါ။ ( ဆူညံနေသည့် နေရာမဟုတ်လျှင် အဆင်ပြေ ၏) ထက်ဝက်ဖွဲ့ခွေထိုင်ပါ (သတိအားကောင်းစေရန် ထိုင်သည့်ဣရိယာပုတ်ကို ပြောခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။မှတ်ချက်။ ။ မေတ္တာကမ္မဌာန်းသည် ဣရိယာပုတ် ၄ ပါးစလုံးဖြင့် အားထုတ်၍ ရပါ သည်။
အိပ်ခါနီး မျက်လုံး မျက်လွှာချသည့် ပုံစံမျိုးလေး ဖြေးဖြေးဖွဖွလေးမှိတ်ပါ ဘယ်ဘက်လက်ဖဝါး ပေါ် ညာဘက် လက်ဖ ဝါးလေး တင်ပြီး လက်မ ချင်း ထိပ်ချင်း ဖွဖွလေး ထိထား ပါ။ ခါးကို မတ် မတ် လေး ထားပါ (အတင်းတောင့် ထားခိုင်း သည် မဟုတ်ပါ နဂို ထိုင် ပုံစံမျိုး လေးနှင့် ထိုင် ပါ ) မေတ္တာကမ္မဌာန်း ပွားများလျှင် စတင် #မရှုပွားသင့်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် (၆) မျိုး ရှိပါသည်။ အဲ့ဒီ ပုဂ္ဂိုလ် များကတော့…၁)မိမိအကျိုးကိုတစုံတရာမပြုဖူးသည့်ပုဂ္ဂိုလ်၂)အရမ်းချစ် သောပုဂ္ဂိုလ်(သားချင်း ၊ဆွေမျိုး၊ညီအကိုမောင်နှမ နှင့်အချစ်ရဆုံး သူငယ်ချင်းများ ပါဝင်သည်) ၃)အလယ် အလတ် ချစ် သော ပုဂ္ဂိုလ် ဤ ပုဂ္ဂိုလ် များကို စတင် ပွားများ မိလျှင် သိမ်မွေ့ တဲ့ လှုပ်ခတ် မှု ရှိ နေပါ သည်…. အဘယ် ကြောင့် ဆိုသော် သူ့၏ မျက်နှာ ကို ကမ္မဌာန်း အာရုံ အဖြစ် ယူရ မည် ဖြစ်သော ကြောင့် သူ၏ မျက်နှာတမျိုးတဖုံ ပြောင်းလဲခဲ့လျှင် ရင်ထဲမှာခံစားမှု တမျိုးဖြစ် တက်ပါသည်..ဆိုကြပါစို့. အဲ့ဒီမျက်နှာ ရွှင်ပြရင် ရင်ထဲမှာ ခံစားမှု တမျိုးဖြစ် သွားပြီးရင်ကို နဲနဲတော့ လှုပ်ရှားသွားစေသည် လှုပ်ရှားသွားရင် ကိလေသာဖြစ်ပါတယ်(ဤသည်ကား သတိထားရမည့်အချက်) အဲ့ဒီကိလေသာ ဖြစ်လာပြီဆိုလျှင် သမ္မာသမာဓိ အထွဋ်အထိပ်ကို မရောက် နိုင်တော့ပါဘူး… ဒါတင်လား မဟုတ် သေးပါနောက်တခါ ငါပို့လိုက်တဲ့မေတ္တာ သူ့ဆီရောက်မှ ရောက်ပါ့မလားဆိုတဲ့ တောင့်တကြောင့် ကြစိတ်လေး တွေလဲ ရှိတက်ပါ သေးတယ်..ဒါကြောင့် ထိုပဂ္ဂိုလ် များကို စစချင်း မူလ ကမ္မဌာန်း အာရုံကို မယူရတာပါ…၄) မိမိ၏အကျိုးမဲ့ကို ပြုတက် သောရန်သူ..(သူ့ကျတော့ ဒေါသ တွေသာ အစဥ်ပွားစရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူလကမ္မဌာန်းအာရုံအ​​ဖြစ်လည်း မယူသင့်ပြန် ပါဘူး)။
၅) မိမိ၏ ဇနီး ခင်ပွန်း(ဆန့်ကျင် ဘက်လိင်)ဒါလေးကတော့ ရှင်းပါတယ် သူမျက်နှာကိုကြည့်ပြီး တော့ စူး စူး စိုက် စိုက် နဲ့ ပွား များ လိုက် ရင် ရာဂ စိတ် တွေ သက်ဝင် လာ တက် တာကြောင့် ပါ ဒီ့ အတွက် ကြောင့် မို့လဲ စတင် မပွား များ သင့်တာပါ..ဒီ အမှတ် (၅) ထိ ပုဂ္ဂိုလ် တွေဟာ တဏှာ ရာဂ နှင့် ဒေါသ တွေသာ ပွားများ လာ တက် သူများ သာမို့ စယူ ခြင်း မျိုး မလုပ် ရတာ ပါ…. တဲ့.. အကယ်၍ မိမိက အပနာစျာန် အထိပေါက်မြောက် သွားပြီဆိုရင်တော့ အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ် များကို အား လုံး တ ညီ ထဲ အ ယုတ် အ လတ် အ မြတ် မ ရွေး နဲ့ မေတ္တာ ပို့ လို့ ရ ပါ ပြီတဲ့ သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မာသကာ နေနဲ့ မေတ္တာ ပို့ လို့ ရပါပြီ…. တဲ့…၆) သေ လွန် ပြီးသော မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် တဦး တ ယောက် ကိုမှ အစယူ၍ မပွားရပါဘူး…အစယူမပွား ရသလိုလည်း ဘယ်တော့ မှလည်း မပွားပို့ရ ပါဘူး.. အဘယ် ကြောင့် နည်း ဒီ မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း ရှုပွား ခြင်းဟာ ပရိကမ္မ နိမိတ် ၊ဥဂ္ဂဟ နိမိတ်၊ ပဋိဘာဂ နိမိတ် များကို ထင်အောင် ရှုပွား ရတာ ဖြစ်ခြင်း ကြောင့် အကယ် ၍ သာ သေတဲ့ သူကို အာရုံ ယူရှုပွားမိရင် သူ့အပြင်မှာ အပြင် အရံ နိမိတ်တွေ ပေါ်လာတက် ပါတယ် ..အဲ့ဒီ အရံ နိမိတ် တွေမှာ သာယာတဲ့ ပုံရိပ်တွေလည်း ရှိတယ်သလို. ကြောက်စရာ လန့်စရာ နိမိတ်ပုံရိပ်တွေလည်း ရှိတက်ပါတယ်.. အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလျှင် မလွဲဧကန် ပြဿနာ တခုတက်နိုင်ပါတယ်..။
သာယာတဲ့ ပုံရိပ်က ကိစ္စမရှိဘူးထားပါတော့ ကြောက်စရာလန့်စရာ ပုံရိပ်ကြီး တခုက ပေါ်လာပြီ ဆိုပါ စို့..အဲ့ဒီ လူသေကောင် ပုံရိပ် ကြီး ဟာ မိမိ၏ အရှေ့မှာ ကြောက် စရာ လန့် စရာ ပုံ ရိပ်ကြီး အဖြစ် နဲ့ ပေါ်လာ ပြီဆိုရင်…..သေချာ ပါတယ် ရှုနေတဲ့ ယောဂီဟာ ကြောက် လန့်ပြီး ထ ပြေး မှာ သေချာပါတယ် နော်… သေတဲ့သူက မိမိကို လာခြောက်တယ် လို့ထင် မှာအသေ အချာပါပဲ.. ဒါမို့ သေသူကို မူလအာရုံအဖြစ် ယူကိုမယူရတာပါ…ဟုတ်ပါပြီ…ယခု ၆ယောက်နှင့် လွတ်ကင်းသော ပုဂ္ဂိုလ် တယောက်ကို ရွေးရပါ တော့မယ်..အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဘယ်လိုလူ မျိုးဖြစ် ရမလဲ ဆိုရင်..သာ မာန် ခင်တယ် မချစ်ရဘူး..ကိုယ်နဲ့ အလွန်းသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ် ကိုယ်နဲ့ မသိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် လည်း မဖြစ် ရပါ ဘူး… တဲ့အဲ့ သူကို မေတ္တာပို့ ကြည့် ရမယ် ပို့ပြီး ရင် ရင်ထဲမှာ ဘဝင်ကျ ရဲ့လား မကျလား ပြန်လည် စမ်းစစ် ရပါမယ်…ဘဝင် မကျရင် မိမိပို့ တဲ့မေတ္တာဟာ အပြင်မထွက်ပါဘူး.. ရင်ထဲမှာ အောင်းနေပါတယ်… ဒါကြောင့် မို့ ဘဝင်ကျတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ကို ရွေးချယ်ရ မှာဖြစ် ပါတယ်.. ဘဝင်မကျဖူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဟာ. မိမိရင်ထဲမှာ ရှင်းပြီး မကျန်ခဲ့ဖူး ခိုးလို့ခုလု ဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒါ ကို ဘဝင်မကျ သေးဘူးဟု ခေါ်ပါသည်။.. တဲ့ရင် ထဲမှာ ရှင်းပြီးကျန်နေခဲ့မှ မေတ္တာဟာ အပြင် ကို ထွက်သွားတာပါ..ရင်ထဲမှာပေါ့ပါးပြီးကျန်ခဲ့ရမယ်…သူ့ဆီကို ရောက်တာမရောက် တာဟာလည်း အရေးမကြီးသေးပါဘူး.. ။
မိမိ၏ စိတ်ထဲမှာ တခုခုရင်ထဲမှာခံမနေရပါဘူး… တဲ့..ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာ ရင်ထဲမှာ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး လွတ်လွတ် လပ်လပ်လေး ဖြစ်သွားရပါမယ်.. ဒါဆို အဲ့ဒီ ပုဂ္ဂိုလ် ကို ရွေးရ ပါမယ်…(ဒီနေရာလေး မှာ မိမိ မေတ္တာ အပြင် ထွက် မထွက် ကို ဘဝင် ကျ မကျ လေးနဲ့ စမ်း သပ်သိ ရှိနိုင် ပါတယ် နော်) နောက်တခါ မိမိပို့လိုက်တဲ့ မေတ္တာဟာ သူ့ဆီကို ရောက်သလား မရောက်ဖူးလား မိမိစိတ်မှာဝေခွဲ နေမယ့် သူမျိုးကိုလည်း မရွေး ချယ်ပါနဲ့ တဲ့..ဘာလို့လဲ ဆို​တော့… အဲ့လူအပေါ်မှာ နဲနဲချစ်တဲ့ စိတ် လေးမိမိမှာ ရှိ​နေလို့ပါ… တဲ့..သာမာန် ခင်မင်သူပဲ ဖြစ်ရပါမယ် မေတ္တာ ပို့ပြီးတဲ့ အခါမှာ မိမိ ရဲ့ရင် ထဲမှာ ဥပေက္ခာပဲ ကျန်နေခဲ့ ရပါမယ် (ဒါဟာ အသက်ပါပဲ) သောမနဿ ဒေါမနဿ တွေဖြစ်ကျန် ခဲ့ရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ် ဆို မရွေးရ ပါဘူး… တဲ့..ကဲ… ဒါဆိုရင်ဖြင့်…အဲ့ဒီ စတင်ရှုပွား သင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဟာ ဘယ်သူဖြစ်နိုင်မလဲ… ဆိုတာကို…အပိုင်း (၃)တွင် ဆက်လက်မျှ ဝေပေးသွား ပါဦးမည်…ဤတွင် အပိုင်း(၂) နိတ္တိတံပါ၏..စာလုံးပေါင်း အမှားအယွင်း များကိုလည်း သည်းခံ၍ ပြင်ဆင်ဖတ် ရှုပေး ကြပါရန် လည်း အနူးအညွှတ် တောင်းပန် ရပါ၏…. သတ္တဝါ အားလုံး တရား တွေ့ ချမ်းမြေ့ ကြပါစေရှင်..
ပထမနဲ့ ဒုတိယပိုင်း တွေမှာ မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း အားထုတ်မယ့် ယောဂီ တယောက် မှာ ကိုယ်ပိုင်ရှိ သင့် ရှိထိုက်တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ ဒေါသကင်းစင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မှသာ မေတ္တာဖြစ်နိုင်ပုံ ၊ဒေါသ စရိုက် ရှိနေတဲ့ သူဟာ မေတ္တာ ကမ္မဌာန်းကို မပွား များမှီ တခြားသော မှုလ ကမ္မဌာန်း တခုခု နှင့် အနည်း ငယ်ကင်း ပါးအောင် ရှုပွား သင့်ပုံ၊ စ သည် များကို ရေးပေး ခဲ့ပြီး ပါပြီ ။ ဘာ ကြောင့် ယခု လို တ ဆင့် ခံထား ရပါ သနည်း ဆိုလျှင် သာမန် မေတ္တာ ပွားရုံ နှင့် နှလုံးအိမ်မှာ အေးငြိ မ်းတဲ့ ဓာတ်တွေ မရှိနိုင် သေးလို့ ပါ။ အဲ့ဒီလို အေးငြိမ်းတဲ့ ဓာတ်တွေ မရှိ လျှင် လည်း မိမိ ပို့လိုက် တဲ့ မေတ္တာ ဟာ တခြား ဆီကို မရောက် နိုင်ပါဘူး တဲ့ မိမိလည်း မအေး ချမ်းဘူး တခြား သူဆီ ကိုလည်း မရောက် ဘူး။ ထို့ကြောင် ပွားများ မည့် ပုဂ္ဂိုလ် တွင် ထိုသို့သော အရာများ ကြိုတင် ရှိနှင့် နေအောင် အရင် ပွား များ ထား ရ ခြင်း ပါ။ ဒီ နေ ရာ လေး မှာ စာရေးသူ အ နည်း ငယ် ဖြည့် စွပ် ပြော ပရ စေရှင် မြေဇင်းနည်း စနစ်ဖြင့် တရားအားထုတ် ထားဖူးသူတ ယောက်သာ ဖြစ်နေခဲ့ ပါလျှင် ဝါယူဝါမှတ် ဆိုသည့် အာနာပါန ကမ္မဌာန်းကို မူလ ကမ္မာဌာန်း အနေဖြင့် ရှုမှတ်ပွားများ ခြင်းကို လွန်စွာ ရင်နှီး ကျွမ်းဝင်ပြီး ဤ မူလ ကမ္မဌာန်းဖြင့်ပင် နိမိတ်များ ရရှိနေကြပေပြီ ထိုသို့သော အဆင့်သို့ ရောက် ရှိနေကြ ကုန်သော ယောဂီများ အတွက်မူကား မေတ္တာကမ္မဌာန်းကို လျှင်မြန်လွယ်ကူစွာ ပွားများ အားထုတ်နိုင်ပေတော့သည်။
သတိမြဲရာပထမ ဆိုသည့်အတိုင်း သတိမြဲဖို့အရာကို ပထမဦးစွာ လေ့ကျင့်အောင်မြင်ပြီးမြောက် ခဲ့ပြီမို့ ထိုယောဂီ အတွက် သည်ကား မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း ကို သီးသန့် ပွားများ ခြင်းသည် လွန်စွာ မှ လွယ်ကူလှပါ၏။ ဤသည်ကား ဆိုလျှင်ဖြင့် မြေဇင်း ယောဂီများကို သိစေချင်သည့် အပိုင်းလေး ကို ဖြည့်စွပ်ရေးပေးလိုက် ရပါ၏။ မြေဇင်းနည်း စနစ်ဖြင့် အားမထုတ်ဖူးသော ယောဂီများ အနေ ဖြင့်လည်း မိမိ တို့ အားထုတ် နေကြ မူလ ကမ္မဌာန်း တခုခု ဖြင့် သမာဓိ ရနေ လျှင်လည်း လွန်စွာ လွယ်ကူ ပါ၏။ ဒုတိယပိုင်း ၏ အဆက် ကို ရေး ကြ ပါဦး စို့…တ ချို့သော ပုဂ္ဂိုလ် များ သည် မိမိ ကိုယ်ကို မချစ် တက်တဲ့ အတွက် ကြောင့် သူတပါး ကိုလည်း မေတ္တာ ပို့ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး မေတ္တာ မထား တက်ကြဘူး မေတ္တာ ပို့ဖို့ ကို အင်မတန်ကို ခက်ခဲ နေကြသူ တွေ ရှိတက် ပါတယ် ဒီလို လူ စားမျိုး ထဲ တွင် စာရေးသူ ပါဝင်ခဲ့ လေသည်။ စာရေးသူ အကြောင်း လေး အနည်း ငယ် ပြော ပေး ပါဦး မည်။ စာရေးသူသည် မိမိကို ယ်ကို လုံးဝမချစ်ပါ မိမိ ကိုယ်ကိုမှ မချစ် တက်လေတော့ သူ တပါးကို ချစ်ဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လို မှကို မဖြစ်နိုင် တော့ တာပါ။ ဟိုး…အရင် တုန်း ကဆို မေတ္တာ ဘယ်လို ပို့ရ တာလဲ? ဘယ် လို မေတ္တာ ထားရ တာလဲ ဆိုတာ ကို အဖြေ ရှာ လို့ ကို မရ ခဲ့ သူပါ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ မေတ္တာ သုတ်တွေ သာရွတ်တယ် ဒေါသက အပြည့် ရှိနေတော့ မအေး ချမ်းခဲ့ ပါဘူး ရွတ်နေတာပဲရှိတယ် စိတ်မှာကမေတ္တာ စိတ်ဖြစ်ကို ဖြစ်မလာပါဘူး။
ဒီအဆင့်တွေ ကိုလည်း စာရေးသူ လေ့ကျင့်ခဲ့ဖူး ပါတယ် ဘယ်လို မှကို မေတ္တာစိတ် မဝင်ခဲ့ သလို မပေါက်မြောက် မအောင်မြင့်ခဲ့ပါဘူး။ လိုချင်နေတဲ့ အေးချမ်း မှုမျိုးကို မရခဲ့ဘူးလို့ ဆိုလို ခြင်းပါ နော် ။ မေတ္တာစိတ် မိမိရင်ထဲ မကိန်းအောင်ပဲ ဒေါသ၊ မာန စတဲ့ ကိလေသာတွေ ကိန်းအောင်း နေ ခဲ့တော့ ဘယ်မှာလာပြီး အေးချမ်းနိုင်ပါ့မလဲနော်။ ဒါလေးက စာရေး သူ၏ ကိုယ်တွေ့ ဥပမာလေး ထည့်ရေး ပေးတာပါနော်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အဲ့ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတွက် မေတ္တာကိုကမ္မဌာန်း တခုလို မျိုးကို များများအားထုတ်ရပါမယ် ရွတ်နေယုံနဲ့တော့ မေတ္တာဓာတ်လှိုင်း ကိန်းဖို့ မဖြစ်နိုင် သေးပါ ဘူး။ ဒီနေရာလေးမှာ အယူအမှတ်တော့ မမှားစေချင်ပါဘူးနော် မေတ္တာသုတ်တော်ကို မရွတ်ဖတ် ရတော့ ဘူးလား အကျိုး မရှိတော့ ဘူးလား ဒီလို တွေလည်း မထင် မြင်သွား စေချင်ပါ ဘူး.နော်။ #ရွတ်ရပါမယ်၊ #ရွတ်ကိုရွတ်ရပါမယ် ဘယ်လိုရွတ်ရမလဲ ဘာကြောင့်ရွတ် ရပါမလဲဆို ရင်တော့ မမြင် နိုင်မကြားနိုင် အရပ်မျက် နှာတွေမှာ ရှိကုန် ကြသော (၃၁) ဘုံသားများ အတွက် ရည်စူးပြီး သူတို့လေးတွေ ငါရွတ် ဆိုပွားများ လိုက်သော မြတ်စွာ ဘုရား ရှင်ကြီး ၏ နှုတ် တော် အစစ် ကြီး ဖြစ်သ ည့် ဤ မေတ္တာသုတ် ကို ရောက်ရာ ဘုံဘဝ ဘုံဌာန ကနေ ကြားနာ ကြရ ကုန်ပြီး ချမ်းသာ ကြပါစေ ဆိုတဲ့ Public ကိုကောင်း စေချင်သည့် ကောင်းစေတနာ အပြည့် ဖြင့် ရွတ်ဆို ရပါမယ် နော် ။ဒါလေးကို အထင်မမှားစေရန် လိုရင်းအတိုလေး ရေးပေးလိုက်ရပါ၏။ အကျယ်တဝင့်ရေး သားထားသော စာများကိုဖြင့် Online စာမျက်နှာ ပေါ်များ တွင်ရော စာအုပ်စာပေ များတွင်ရော ဖတ်ရှု့ လေ့ လာနိုင် ကြပါ တယ်နော်။ စာရေးသူ ကတော့ စာရေးသူ ကျင့်သုံး ဆောက်တည် ခဲ့တဲ့ အပိုင်းလေးကပဲ ကွက်ပြီး ရေးပေး သွားပါ မယ်နော်။
ဆက်ပါဦးစို့.Depression ဝင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တွေဟာ ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် လုံးဝ မချစ်တက်ကြ ပါဘူး..အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ သူဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေကြောင်း ခဏခဏကြံပါတယ်…တကယ်တော့ ပိုက်ဆံ မပေးရတဲ့ အလကားရတဲ့ အရာဖြစ်တဲ့ မေတ္တာကို တောင် ခေါင်းပါး ငတ်ပြတ် ဆင်းရဲနေ ကြတဲ့ သတ္တဝါတွေ ဟာဆိုရင် အ​တော့ကို သနားစရာ ကောင်းလွန်းလှပါတယ်.. ရေအသက် တမနက်တဲ့ ရေဟာ သတ္တဝါ တဦးအတွက် အင်မတန်ကို အရေးကြီး လွန်းလှပါတယ် အဲ့လောက် အရေးကြီးတဲ့ ရေငတ်တာထက် မေတ္တာငတ်တာဟာ ပိုပြီးဆိုးလှပါတယ်..တဲ့. လူဟာ သူတပါး ၏ မေတ္တာ မရလို့ ငတ်နေတာထက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေတ္တာ မရှိတာဟာ အဆိုးဆုံးပါပဲ… တဲ့ကိုယ့် ကိုကိုယ် မေတ္တာ မထားနိုင် တာဟာ ရေငတ်တာထက် ဆိုးလှပါတယ် အဲ့လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာ ဘယ် သူ့ကို မှ မချစ်တက် တာမို့ အချိန် မရွေး လူ တိုင်း ကို ဒုက္ခ ပေးနိုင် ပါတယ်။ တဲ့ သတ္တဝါ တွေဟာ ကိုယ့် ကိုကိုယ် အချစ်ဆုံးပါပဲ… တဲ့ကိုယ့် ကိုကိုယ် မှမ ချစ်ရင် ဘယ်သူ့ ကိုမှ မေတ္တာ ထားနိုင် မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး..တဲ့ထို့ကြောင့် မေတ္တာစတင်ပို့ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ် သည်..# မိမိ ကိုယ်ကိုသာ အရင် ပို့ရ ပါမည်။ ငါသည် ဘေးရန် ကင်း ရ ပါ လို ၏ ၊ ချမ်း သာ ရ ပါ လို ၏… လို့ စိတ် ထဲ က နေ မိမိ ကိုယ် ကိုကိုယ် ပို့သ ရပါမယ်…ဒီနေရာ လေးမှာ တချို့ မေး တက် ကြပါသည်…အဲ့ ဒီလို #ငါသည် ဘေးရန် ကင်းရ ပါလို၏ ဆိုတော့ အတ္တ ပါ နေသလို ဖြစ် မနေ ဘူးလား… တဲ့… ဆို ပြီး မေးတက် ကြပါ တယ်…ဒီနေရာ လေးမှာ လောဘနဲ့ ဆန္ဒကို ကောင်းကောင်း ကြီး ကွဲကွဲပြားပြားသိထားရင် အဆင်ပြေပါတယ်… လောဘကလည်း လိုချင်တာပဲ..ဆန္ဒကလည်း လိုချင်တာပါပဲ…။
သူတပါးကို မထိခိုက်ပဲ ရသင့်ရထိုက်တာကို လိုချင်တာဟာ ဆန္ဒ မို့သူဟာ အကုသိုလ် မဟုတ်လို့ အပြစ်ကင်းပါတယ် ငါသည်ဘေးရန်ကင်းရပါလို၏လို့ ဆိုတာဟာ အပြစ်ကင်း ပါတယ် သူတပါး ကို လုံးဝ မထိခိုက် ပါဘူး…နောက်တမျိုး စဥ်းစား လို့လည်း ရနိုင်ပါ သေးတယ်… လူဟာသူတပါး ကို ချစ်မိပြီ ဆိုလျှင် ကိုယ့်ထက် ပိုပြီးတော့ ဦးစား ပေးတက်တဲ့ သဘော ရှိပါတယ်…အဲ့တော့ မိမိ ထက်ပို၍ ချစ်တဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်နေတော့ ကြောင့်ကြ စိတ်တွေ ဖြစ်တက် ပါတယ် စိတ် ပူတက် တာ တွေ စိုးရိမ် စိတ်တွေ ဖြစ်တက် တာတွေ ကြောင့်မို့ အချက် အလက် တွေနဲ့ သိပ် မကိုက် ပြန် ပါဘူး…နော်..ဒါကြောင့်မို့ မိမိကိုယ်ကိုစတင် မေတ္တာပွားပို့ သင့်တာဟာ သန့်စင်ပါတယ်.. အတ္တ မ ဖြစ်နေ ပါဘူး….ဒါမို့ မိမိကိုကိုယ် စတင်မေတ္တာ ပွားပို့သင့် တာပါ…ဒါလေးက အတ္တမဖြစ်ပါဘူးဆို တာလေးကို ရှင်းပြပေးတါပါ…နော်ဟုတ်ပါပြီ ဒါဆို စတင် မေတ္တာ ပွားပို့မည့်သူကို ရွေး ထုတ်ပြီး ပြီမို့..စတင်မေတ္တာပို့ပါတော့မည်…မိမိရဲ့ပုံကိုအာရုံယူရပါမယ်..#မိမိစိတ်ကလေးကိုမိမိအာရုံယူထားသည့်မိမိ၏#ပုံရိပ်မှမျက်နှာပေါ်မျက်ခုံးနှစ်ဘက်ကြားအလယ်ဗဟိုချက်တဲ့တဲ့ကို#သေသေချာချာစူးစူး စိုက်စိုက် လေးစိုက်ကြည့် လိုက်ရ ပါမယ်…ပြီးလျှင် မျက်လုံးကို မှိတ်လို က်ပါမယ်.. .#အပြင်မှာမြင်ရသလိုမျိုးပုံရိပ်ကလေးကစွဲပြီးကျန်နေရပါမယ်..မိမိကမျက်လုံး မှိတ်ထားတယ် ပုံရိပ်ဟာ ထင်ထင်ရှားရှားကြီးကို မြင်နေရပြီဆို..ထိုအဆင့် အောင်မြင် ပါပြီ…နော်… #ကြာကြာ ကြည့်နိုင်ရပါမယ်..#အတွေးရှိရင်တော့အာရုံပျောက်ပါတယ်…#ပုံရိပ်ထင်ရှားနေပြီဆိုတော့မှမေတ္တာပို့ကြည့် ပါမယ်.. ပို့တဲ့အခါမှာ အထက်က ပြောခဲ့သလို ငါသည်ချမ်း သာရပါ လို၏ လို့ ဆိုတဲ့ စာသားတွေနောက်ကို အတွေးမလိုက်သွားရပါဘူး..။
.#ဗဟိုချက်မှာပဲ သမာဓိကို စိုက်ထားရ ပါမယ်…အဲ့ ဒီလို စိုက်ထား ရင်း ပုံရိပ်ကနေ မိမိကို ပြုံးပြ နေသလို မဲ့ပြနေသလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်ခံစားလာလျှင်လည်း မိမိနှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးနော်…ပုံရိပ်ဆီက ဘာဖြစ် လာလာ ခွဲခြားမဝေဖန် ပါနဲ့…#ဝေဖန်ရင်ကမ္မဌာန်းပျက်ပါတယ် ငါ့မေတ္တာပို့တာ ရရဲ့လား ရောက်ရဲ့လား စသဖြင့်ပေါ့…လိုက်ပြီး တိုင်းတာနေတဲ့ စိတ်တွေဟာ ကမ္မဌာန်း ပေါ်မှာ ရှုစိတ် မရှိ တော့ဖူး ဆိုတာ သေချာ တာမို့ ဒီအတွက် ကြောင့်ပင် သမာဓိ ပျက်သွားရ တာပါ… မိမိ၏ အလုပ် သည် ဗဟို ချက်မှာ ပဲ စိတ်ကို စူးနစ် စိုက်ထား ရမှာ ပါ… ဒီနေ ရာလေးမှာ မိမိပို့ လိုက်တဲ့ မေတ္တာ ရောက်တယ် မရောက် ဖူး ဆိုတာ လိုရင်း မဟုတ် ပါ.. မိမိစူးစိုက်ထားတဲ့ သမာဓိ ထူထောင်နိုင် ဖို့ သာ လိုရင်းဖြစ် ပါတယ် ရှင် ဒီနေရာလေးမှာ တခုထပ်မံ၍ရှင်းပြပါဦးမည် ယခုမေတ္တာ ကမ္မဌာန်း အားထုတ် ပုံဟာ နှုတ်က ရွတ်ဆိုပြီး ပို့နေရတာမျိုး မဟုတ်သလို စိတ်နဲ့ရွတ်ပြီး ပို့နေရ တာလည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး…စိတ်နဲ့ ညွှတ်ကိုင်း ပြီးပို့လွှတ် နေရတာပါ..စိတ်နဲ့ ရွတ် ပွားပြီး ပို့ တာတွေ ဟာ သတ္တဝါ တွေများ လာတဲ့ အခါကျရင် ပင်ပမ်းလာ တက်ပါတယ်… ။
စိတ်မှာ ပင်ပမ်း မှုဖြစ် ပေါ်လာ တယ်ဆိုရင် ရလဒ်က မကောင်းပါ ဘူးနော်… စိတ်နဲ့ ညွတ်ပို့တယ် ဆိုတာ ကကျတော့ သူနဲ့မတူပါဘူး..မိမိ၏ ရွှင်ပြုံးနေတဲ့ နှလုံးသားက ထွက်ပေါ် လာတဲ့ စေတနာ နဲ့ ပြုံးပြီး ကြည့် လိုက် ရုံနဲ့ အဲ့ဒီ ကမ္မဌာန်း ကိစ္စပြီးသွား ပါတယ်…ဒါမို့ စိတ်နဲ့ ညွတ်ပို့ ရမယ် လို့ဆို လိုတာပါ…ဟုတ်ပါပြီ ဒါဆို စိတ်ညွတ်တယ် ဆိုတာ ဘယ်လို လုပ်တာလည်း ဘယ်လို မျိုးကို ခေါ် တာလဲ ဆိုပြီး မေးလေ့ မေးထ ရှိတက်ကြပါတယ်… ဒါလေး ကိုလည်း အနည်းငယ် ရှင်းပြ ပေးပါ ဦးမည်…ဥပမာဆို ကြပါစို့ မိတ်ဆွေ တယောက် နဲ့ လမ်းမှာတွေ့ ကြပြီ ဆိုပါစို့ အကယ် ၍ မိမိ က စတင် မနှုတ်ဆက် မိလျှင် သူများငါ့ကို တမျိုး ထင်သွားမလား ဘာညာ စသဖြင့် အတွေးတွေ သို့ လော သို့လော ဖြစ်ပေါ် သွားမှာ အမှန်ပါပဲနော်… ။ ထို့ကြောင့် တွေ့ ပြီဆို တာနဲ့ လက်ပြ ၍ သော် ၎င်း လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်၍ သော်၎င်း အနည်းဆုံးအဆင့် ပြုံးပြ၍တော့ နှုတ်ဆက်ကြ သည်မဟုတ် ပါလော…လူတယောက် အားပြုံပြ လိုက်ခြင်းသည် တဲ့.. ထိုသူ့အား ကရုဏာ လေး ပေး လှူလိုက် ခြင်းမည်၏… တဲ့…အပိုင်း(၄) တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြပါဦးမည်။
One thought on “မေတ္တာကမ္မဌာန်းအားထုတ်ပုံ”
အပိုငျး (၄) ဆကျဖတျဖို့ လမျးညှနျပေးပါဦးရှငျ့